Illador b & b igumbi Blu kunye wi-fi - I-Airbnb
Illador b & b igumbi Blu kunye wi-fi
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguRoberta
Igumbi lokurenta elinegumbi lokuhlambela alisebenzisi khitshi. Isidlo sakusasa sifakiwe kodwa ungasifumana kwihotele yam kufutshane nehotele yaseStella d'oro kumgama weemitha ezili-100. Indlu ibekwe kumbindi weVillasimius apho ngokuhlwa ungahambahamba kwisitrato esikhulu kwaye ufumane imivalo, iivenkile zokutyela kunye neevenkile. Sikumanyathelo ambalwa ukusuka kwisikhululo sebhasi esikusa kwiilwandle ezahlukeneyo. Indlu ixhotyiswe nge-wifi. Igumbi libekwe kumgangatho wokuqala kwaye linegumbi lokuhlambela langaphandle labucala, iTV kunye ne-air conditioning, ikhuselekile kunye nesomisi seenwele.
Indlu imi kumbindi weVillasimius, apho ngokuhlwa ungahambahamba kwisitrato esikhulu kwaye ufumane iipizza, iivenkile zokutyela kunye neevenkile. Sikumanyathelo ambalwa ukusuka kwisikhululo sebhasi esikusa kwiilwandle ezahlukeneyo. Indlu ixhotyiswe nge-wifi.Igumbi likumgangatho wokuqala, linegumbi lokuhlambela langaphandle labucala, iTV kunye ne-air conditioning, i-hairdryer kunye neseti yembeko. Kwiindwendwe 'egadini uya kufumana izitulo zetafile kunye neempahla. Sisisombululo esifanelekileyo kwabo bafuna indawo yokuhlala ephantsi kwiziko.
Indlu ibekwe kumbindi weVillasimius. Ayinandawo yokupaka kodwa isimahla kufutshane. Kwizithuthuthu kunye neebhayisekile kumgama weemitha ezimbalwa sinendawo yokupaka yangaphakathi. Ngaphambi kwendlu kukho indawo yokumisa iibhasi ekhokelela kwiilwandle ezahlukeneyo.
Izitshixo ziya kunikwa xa ufika. Kwabo bafika ngemoto asinayo indawo yokupaka yabucala kodwa kukho iindawo zokupaka zasimahla ezikufutshane. Siya kuba khona xa ufika, ngalo naluphi na ulwazi esinokulufumana ngefowuni, imiyalezo kunye nee-imeyile. Ukutshintsha kwelinen yelinen kunye neetawuli kwenziwa rhoqo ngeentsuku ezi-3, kunye nokucoca igumbi.
Izitshixo ziya kunikwa xa ufika. Kwabo bafika ngemoto asinayo indawo yokupaka yabucala kodwa kukho iindawo zokupaka zasimahla ezikufutshane. Siya kuba khona xa ufika, ngalo naluphi…